» “२ ठाउँमा मुद्धा हाल्दा के, हन्छ सजाए ? पल शाहलाई अपराधि भन्न पाइन्छ ? कत्ति सजाए हुन्छ ? “२ ठाउँमा मुद्धा हाल्दा के, हन्छ सजाए ? पल शाहलाई अपराधि भन्न पाइन्छ ? कत्ति सजाए हुन्छ ? – हाम्रो खबर
“२ ठाउँमा मुद्धा हाल्दा के, हन्छ सजाए ? पल शाहलाई अपराधि भन्न पाइन्छ ? कत्ति सजाए हुन्छ ?
2022, March 9th, Wednesday
“यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रकरणले तरंगित छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलेब्रिटीहरु खुल्न थालेका छन् ।”
“सुरुको समय यस बिषयमा अधिकांश कलाकर्मी मौन थिए । तर पछिल्लो दिनमा भने सेलेब्रिटीहरु एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका हुन् । उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आह्वान गरिरहेका बेला पल भने पछिल्ला दिनमा भित्र भित्रै टुट्न थालेका छन् । एकातिर नाबालिग गायिका पनि विक्षिप्त पक्कै बनेकी छिन् ।”
“जब’रज’स्ती क’र’णीको मुद्दा खेपिरहेका चलचित्र अभिनेता पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । फागुन १५ बाट पल शाह तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन् । आइतबार दोस्रोपटक म्याद थप हुँदासम्म प्रहरीले पल शाहसहित ५ जनाको बयान लिएको छ ।”
“१७ वर्षीया बालिकाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा आफुसँग नजिकिएका शाहले पटक–पटक ब’ला’त्कार र यौ’न दु’र्व्यव’हार ग’रे’को भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।”
“काठमाडौं-पल शाह प्रकरण यतिबेला गर्माएको छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी हिरासतमा गएपछि कोही पलको पक्षमा छन् भने कोही पीडित बालिकाको पक्षमा छन् ।”
“प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलेब्रिटीहरु खुलेर बोल्न थालेका छन् । उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन,नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।”